Kachasị mma mkpu maka gam akporo a na-akpọ Oge ya na nke a bụ ihe niile ọ na-enye anyị | Gam akporosis
Kachasị mma mkpu maka gam akporo a na-akpọ Oge ya na nke a bụ ihe niile ọ na-enye anyị
N'ezie, ọtụtụ n'ime unu, ọ bụrụ na m gwa unu aha ahụ Bịara n'Ezi Oge, ị maraworị ngwa m ga-ewetara gị ma wepuo onwe gị n'ụzọ ọ bụla. Maka ndị gị na-amabeghị ya, O doro anya na ọ bụ mkpu kacha mma maka gam akporo.
N'isiokwu na-esonụ, tinyere nkuzi vidiyo zuru ezu, m ga-akọwapụta ya ma daba n'ime ihe niile nke na-enye oge na-enye anyị ka anyị tụlee ọtụtụ dị ka ngwa mkpu kacha mma maka gam akporo, ya mere ọ bụrụ na ị ka bụ otu n'ime ndị ọrụ ole na ole na-amaghị banyere ngwa mkpu a dị egwu maka gam akporo, ana m akpọ gị òkù ka ị pịa «Gaa n'ihu Ọgụgụ post a», Ka ọ ghara ileghara vidiyo m hapụrụ gị dị n'elu usoro ndị a ebe ị nwere ike iji anya gị hụ ihe kpatara ya ji bụrụ ngwa mkpu kacha mma maka gam akporo.
1 Ihe niile nke n’ezi oge na-enye anyị, mkpu kachasị mma maka gam akporo
1.1 Budata oge maka n'efu na Playlọ Ahịa Google
Ihe niile nke n’ezi oge na-enye anyị, mkpu kachasị mma maka gam akporo
Iji malite ịgwa ha nke ahụ Bịara n'Ezi Oge bụ kpam kpam free agwa ngwa, nke anyị ga-enwe ike ibudata ozugbo na'slọ Ahịa Play nke Google, nke bụ ụlọ ọrụ gọọmentị maka gam akporo.
Budata oge maka n'efu na Playlọ Ahịa Google
Bịara n'Ezi Oge - Elekere Mkpu
Iji malite na nyocha miri emi nke oge, gwa gị na n'etiti ọtụtụ ihe ekwesịrị ịkọwapụta banyere ngwa nke ọtụtụ ndị na-ewere dịka ngwa mkpu kacha mma maka gam akporo, bụ na ọ nwere ọrụ ole na ole ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa na ụdị ahụ nwere ike igosi. Ọrụ a dabere na ya mmekọrịta na akaụntụ Google anyị, nke na-enye anyị ohere na, ọ bụ ezie na anyị na-agbanwekarị ngwe gam akporo, n'ihi mmekọrịta a na-adịgide adịgide na akaụntụ Google anyị, anyị ga-enwe ike emeela ka mkpuchi anyị niile mekọrịta na ngwaọrụ anyị niile n'otu oge naanị site na nbudata, wụnye ngwa na ịbanye na akaụntụ Google anyị kwekọrọ.
Ihe atụ a maka m n'onwe m dị mkpa na otu n'ime isi ọrụ nke oge na-adị n'elu ngwa mkpu maka gam akporo dị ka ngwa elekere Google nke na-enweghị nke a Mkpa m ga-achọta na m na-anwale ọtụtụ njedebe gam akporo.
Ihe ndị ọzọ nke oge ya kara nke ukwuu karịa ngwa mkpu ndị ọzọ maka gam akporo, anyị nwere ike ịhụ ya ma anyị ghọtara ya ozugbo anyị malitere ngwa ahụ maka oge izizi, nke ahụ bụ Bịara n'Ezi Oge nwere ezigbo njirimara ọrụ nke ọma nke, na mgbakwunye na inwe ike ịgbanwee n'etiti Skins ma ọ bụ isiokwu dị iche iche dị na ha niile kpamkpam n'efu, anyị ga-enwe ike ịnweta nhazi nke mmetụta eserese nke interface ọrụ a dị egwu ka ọ wee gbanwee maka akụ nke anyị gam akporo ọnụ.
Ozugbo anyị mepere Oge, anyị ga-ahụ interface njirimara mara mma nke anyị nwere ụfọdụ Gradient-aj u na agba na mmetụta nke ga-adabere a ukwuu na àgwà na ike nke anyị ama ma ọ bụ mbadamba. Njirimara onye ọrụ a nwere akụkụ atọ dị iche iche nke ọma, nke anyị ga-enwe ike ịnweta site na ịpị ma ọ bụ ịmị aka nri ma ọ bụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ.
Ihuenyo mbụ anyị na-ahụ bụ nke ahụkarị elekere ihuenyo na-egosi oge dị ugbu a na ozi banyere mkpu mkpu ọzọ. Tụkwasị na nke a, na ihuenyo elekere a anyị ga-enwe ike ịgbanwe isiokwu na agba na-enweghị onwe ya na nke atọ ndị ọzọ, gbanwee ụdị elekere iji gosipụta ma ọ bụ rụọ ọrụ ọnọdụ abalị iji jiri ya dị ka elekere desktọọpụ.
Site na ịmị n'aka nri, anyị ga-enweta ebe mkpuchi ebe anyị ga-enwe ike ịtọ oti mkpu ma ọ bụ jikwaa ihe mmemme emegoro. Nke a na mgbakwunye na ịnwe ike ịbanye na nhọrọ ebe anyị ga-enwe ike ịhụ ma jikwaa ngwaọrụ anyị niile na-arụ ọrụ ma rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị mkpọtụ na nke ọ bụla n'ime ha n'ebughị ụzọ mepee ngwa ahụ na mbido ahụ anyị kwuru.
Ihe ọzọ na-amasị m oge kachasị mma, n'ezie m hụrụ nhọrọ a n'anya, bụ na mgbe mkpu mkpu na-ada n'ọtụtụ ọnụ n'otu oge, naanị site na ịgbanwu ya na otu n'ime ha, nke a ga-agbanyụkwa na ọdụ ndị ọzọ na-akụ n'oge aNke a ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị nọ n'ebe dị iche, ọbụlagodi na njedebe nke na-akụ na-ada n'ụlọ ma anyị pụọ na ya. Nke a ma ọ bụrụhaala na ọ na-ada ụda na ọdụ abụọ n'otu oge ahụ.
Mgbe ahụ, anyị nwere nhọrọ maka kulie na ngwa nke uzi, nke e mere iji teta anyị n'ụzọ dị jụụ kachasị mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị emee nhọrọ ahụ Smart Bilie nke bụ ụdị ọgụgụ isi edemede na nke anyị na-aga na-adọ aka ná ntị nke nta nke nta nke mere na edemede bụghị otú ike, na dịka m na-ekwu, bụrụ ihe dị adị na obere nsogbu dị ka o kwere mee.
Imecha, eji na aka ekpe anyị ga-abanye na akụkụ nke ngụ oge na elekere nkwụsị, nke anyị ga-enwe ike ịgbanwe site na iji swipe elu ma ọ bụ ala. Enwere ike ịgbanwe usoro a na elele oge na usoro isiokwu dabere na nke ọzọ.
Maka nke a na maka ihe niile m na-akọwara gị na vidiyo m hapụrụ gị na mbido post, Oge n'ezi oge bụ ihe mgbagha kachasị mma maka gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kachasị mma mkpu maka gam akporo a na-akpọ Oge ya na nke a bụ ihe niile ọ na-enye anyị
M na-eji "Turbo Oti mkpu". O yiri nnọọ ka m mma na Mmepụta bụ Spanish, na mba, Anaghị m ọrụ 😉
Zaghachi Carlos García
Emela ụdị mbụ ị na - ahọrọ ezigbo mkpu. Ekwenyesiri m ike na ị gbabeghị mkpu mkpu, nke bụ ngwaahịa mba na n'efu.
Gam akporo N maka Motorola G4 na G4 Plus ka na-anwale beta beta
Moto G4 Plus Vs Moto G5 Plus, mmalite.